डेनमार्कबाट आउला नेपाललाई कोरोना खोप ? - Vishwanews.com
डेनमार्कबाट आउला नेपाललाई कोरोना खोप ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारले डेनमार्क सरकारसँग खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । डेनमार्क सरकारले कोरोना खोप उपलब्ध गराउन सकारात्मक देखिएसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागले समेत पत्र लेखेको नेपाली संचारमाध्यमले लेखेका छन् । डेनिस सरकारसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले एस्ट्राजेनेकाको खोप १४ लाख डोज उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
खोपको उपलब्ध गराउन सहजीकरणका लागि समेत सरकारले युनिसेफसँग आह्वान समेत गरेको छ । यो खोप कोभ्यासको अनुदान नभएको बताइएको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपाललाई कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यद्दपी यसको संख्या र मिति तय भएको छैन ।
नेपालमा पहिलो खोप लगाएका करीव १४ लाख जेष्ठ नागरिक खोपको पर्खाइमा छन् । दोस्रो खोप समयमा नआउँदा उनीहरुमा मानसिक तनाव बढेको छ । भारतले खोप निर्यात रोकेपछि नेपालले पैसा पठाएपनि खोप आउन सकेको छैन ।